ODOO: Ny OpenSource ERP izay manome zavatra horesahina! | Avy amin'ny Linux
ODOO: Ny OpenSource ERP izay manome zavatra horesahina!
pedrini210 | | fampiharana
Odoo Is a rafi-drafitra fandrindrana loharanom-bola ho an'ny orinasa misokatra taloha OpenERP (ho an'ny fanafohezana azy amin'ny teny anglisy, Enterprise Resource Planning), ny fanovana anarana dia noho ny fisian'ny andiany 8.0 Odoo mivoatra ary lasa mihoatra ny rafitra ERP satria nampiana asa mahaliana sy mahasoa izay miasa ho fampiharana na bilaogy, izany hoe, tsy mila tantanan'ny ERP (na eo aza izany dia mamela ny mpampiasa azy hanohy hanao izany).
Izany no antony nanapahan-kevitra ny tompony hampihatra paikady Branding ary hihataka kely amin'ny fanafoanana ny fanafohezana "ERP" satria miaraka amin'ity kinova vaovao Odoo ity dia mandrakotra sehatra maro kokoa, zavatra iray izay tsy nahatratra rafitra ERP hafa; lasa toy izao "Suite na andiana fampiharana" araka ny famaritan'izy ireo azy izao.
Raha ny marina dia manamafy ihany koa izy ireo fa ny "oes" roa misesy dia nifandray tamina orinasan-tsolosaina tena mahomby toa an'i: Google, Facebook na Yahoo. Asa tena tsara momba ny famakafakana marika nataon'ny ekipan'ny Odoo!
Fitaovana inona no atolony antsika?
Ankehitriny dia mandeha amin'ny ampahany tsara indrindra izahay, Odoo dia iray amin'ireo rafitra tsara indrindra eny an-tsena hitantanana orinasa nanomboka teo ny fampiasa azy dia karakarain'ny modules d'exploitation (Amin'izao fotoana izao dia misy modules mihoatra ny 500 mamelona ny fotony ary voarindra amin'ny fiteny Python) izay mifampitohy amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo dingana rehetra ireo sy ny fampiorenana azy ireo amin'ny fampiharana iray mba hialana amin'ny famerenana data izay miteraka lesoka amin'ny ankamaroan'ny ERP.
Amin'ny ankapobeny dia mamela antsika izy io:
Fanaraha-maso tanteraka ny tahiry, trano fanatobiana entana ary ny fanatobiana entana.
Tetikasa sy fitantanana asa.
Fitantanana ny varotra sy ny faktiora.
Kaonty momba ny kaonty sy fanaraha-maso ny asa.
Drafitra / fanatanterahana ny baikon'ny asa.
Fanaraha-maso ny fizotry ny vokatra amin'ny famokarana.
Marketing mifandraika amin'ny mpanjifa.
Fitantanana ny tahirimbola: fanangonana sy fandoavam-bola.
Fitantanana ny mpiasa ao amin'ny orinasa.
Ary ity mba hilazana fitaovana vitsivitsy!
Module Odoo sasany
Amin'ny ankapobeny, ny rafitry ny rafitra dia mpanjifa / mpizara azo ampiharina amin'ny Linux sy Windows, amin'ity fomba ity dia afaka miasa amin'ny tahiry mitovy data ny mpampiasa rehetra. Miaraka amin'ny kinova vaovao Odoo nandeha tamin'ny fampiasana Launchpad (bzr) a Github fanatontosana ity fanatsarana kaody ity.
Tombony ara-teknika iray hafa ny fahafahan'ny mpanjifa mampiasa Odoo amin'ny browser rehetra, na avy amin'ny a solosaina birao, solosaina finday na takelaka, ary avy amin'ny toerana rehetra eto an-tany. Izy io koa dia manana fomba fijery an-tranonkala notsorina, fa miaraka amin'ireo fiasa rehetra azo jerena amin'ny fomba feno, namboarina manokana ho an'ny efijery finday avo lenta. Ny hany ilainao dia fifandraisana Internet tsara.
Amin'ny fotoana fifanakalozana data client-client dia azo atao amin'ny alàlan'ny XML, Net-RCP ary JSON.
Tombontsoa amin'ny rafitra Odoo
Fahalalahana fampiasana sy fizarana indray.
Fampiroboroboana ny fifaninanana maimaimpoana.
Fanohanana maharitra sy fifanarahana.
Rafitra azo antoka kokoa.
Fanamboarana bibikely haingana sy mahomby kokoa.
Fomba tsotra sy miray amin'ny fitantanana lozisialy.
Ka raha liana amin'ny fandaminana ny orinasanao ianao Odoo dia safidy tena tsara izay tsy maintsy andoavanao vola kely noho ny fivoarany eo amin'ny tontolon'ny rindrambaiko maimaimpoana.
Raha mila fanazavana fanampiny dia azonao atao ny manontany an'io rohy.
Raha te hanandrana ianao dia eto ny repository ao amin'ny GitHub.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » ODOO: Ny OpenSource ERP izay manome zavatra horesahina!
Tsy isalasalana fa nijery ilay tetikasa tao amin'ny GitHub aho sy ny pejiny ary araka ny voalaza eto dia mampiasa python ity tetikasa ity. Fa karazana python inona io, fantatro foana fa ny script python, saingy nahita tetik'asa marobe miaraka amin'ny python web aho fa rehefa mitady izany aho dia mahazo an'i Django, izay rehefa hitako (sy ahitako ireo fampianarana) dia mitovy foana ny endriny (bilaogy na forum Tsy tadidiko akory). Na izany na tsy izany dia nolazaiko izany satria te-hampiasa zavatra ho an'ny tranonkala tsy Php aho hatrizay, saingy tsara tarehy izany ary tena tsara ary miasa sy matanjaka koa io. Teo no niaviako ny hevitro hatramin'ny nampiasako ny C # sy ny ASP.NEt fa te hiova foana aho, raha misy afaka mamaly ahy dia tena feno fankasitrahana aho.
Elle dia hoy izy:
Tsy dia haiko loatra ny tianao holazaina rehefa manontany ianao hoe karazana python io, Django dia malaza be ny mampivelatra azy nefa amin'ny farany dia mianatra mampiasa Django ianao mba tsy hanao programa amin'ny python.
Ity misy fampahalalana bebe kokoa
Valiny tamin'i Elle
Julio Saldivar dia hoy izy:
Manoro hevitra ny Web2py aho amin'ny fandefasana programa amin'ny tranonkala, rafitra an-tranonkala Python toa an'i Django izy io fa mifantoka kokoa amin'ny fihenan'ny fihodinana ianarana.
Ny antontan-taratasy ofisialinao amin'ny Espaniôla:
Amin'izao fotoana izao ho an'ny fandaharana dia ampirisihina mafy hampiasa rafitra izay manampy anao hanao fampivoarana haingana sy voadimandry kokoa.
Valiny tamin'i Julio Saldivar
Oscar Javier dia hoy izy:
Salama ry namana Alejandro ny odoo anananao fahalalahana manao modules amin'ny python ary manamboatra azy ireo amin'ny filanao, manana ny mahatsara sy maharatsy azy miaraka amin'ny rafitra rehetra ianao, azoko lazaina aminao fa ny lafy iray dia ny fanomezana mora kokoa ny php fa tsy midika izany aza miditra amin'ny fitondra mande, mety ho lafo kokoa ny miresaka dolara na ny vola iasanao, fa raha te hahalala ianao hoe inona ny odoo ao anaty synthes dia toy ny manana motera rafitra izay vonona anao hampiasa azy io ary hametraka ireo modules ary hampifanaraka azy ireo karazana wordpress.
Misy fanontaniana hafa apetrako aminao ny mailako kajje69@gmail.com
Valiny tamin'i Oscar javier
Raha misy olona liana amin'ny Open Source ERP dia manana safidy mahery vaika izy ireo http://www.tryton.orgRaha ny fahitako azy, ny olana lehibe amin'ny Odoo dia ny fifindra-monina amin'ny kinova vaovao satria tsy maintsy mandalo ny fizahana bebe kokoa ianao raha manana modules hifindra monina.
NeoRazorX dia hoy izy:
Marina fa ny fivoaran'ny Odoo dia tsara, na dia mbola mahita fahasarotana be loatra amin'ny interface aza aho, mihoatra ny dashboard. Saingy, ny ahy dia hevitra liana, satria izaho no mpamorona ny FacturaScripts, ary "mihoatra ny latsaka" ny fifaninanana 😀
Valiny amin'i NeoRazorX
Ny iray hafa dia ny webERP, rafitra fitantanana orinasa sy fitantanana kaonty izay tsy mila tranonkala na mpamaky tranonkala fotsiny. LAMPARA tanteraka (Linux, Apache, MySQL, ary PHP), mahery be izy io nefa mandany loharano vitsivitsy. http://www.weberp.org/
Safidy tena tsara, manomboka mampiasa azy aho ary toa matanjaka be.
Valiny ho an'ny vahiny
rOA dia hoy izy:
Ary miaraka amin'ny POS POS ho an'ny fivarotana ara-batana mifandraika amin'ny fivarotana an-tserasera. Manao ahoana i Odoo? Solony hafa? Prestashop dia manolotra azy ihany fa mila plugin fanampiny ianao amin'ny fivarotana ara-batana POS ...
Mamaly an'i Iki
Aiza no ahazoako ny kaody loharano handinihana azy?
William dia hoy izy:
Manampy maimaim-poana ve izany sa mandoa vola sa hybrid, oviana no tokony handoa izany sa aloa isaky ny mpampiasa? Raha vitsy ny orinasako, ohatrinona no nandoavanao, raha antonony na lehibe izy, azafady mba lazao amiko ny vidiny
Valiny tamin'i William
Salama William, ity ERP ity dia manana kinovan'ny fiarahamonina misokatra ary manana ny kinalan'ny orinasany (ho fanampin'ny kinovan'ny SAA ao anaty rahona), andefaso mailaka amiko admin@desdelinux.net na manorata ahy amin'ny whatsapp +51994867746 ary afaka manoro hevitra anao amin'ny antsipiriany bebe kokoa aho mba hampiharana izany amin'ny orinasanao
Mario rodriguez dia hoy izy:
Tsy misy isalasalana fa rafitra matanjaka be i Odoo, averiko jerena ity lahatsoratra ity ary tena ilaina izany, avy any Linux, heveriko fa io no tiako indrindra ... tsy dia manavao firy izy ireo, eny, saingy atiny misy kalitao izany.
Valiny tamin'i Mario Rodriguez
Javier Montenegro dia hoy izy:
Nifindra monina ny data nataoko avy amin'ny kinova Odoo teo aloha ho an'ilay iray vaovao, miaraka amin'ny orinasa MiTSoftware, tsy misy angona tavela, ary ankehitriny dia miasa tsara kokoa amin'ny kinova vaovao aho.
Valiny tamin'i Javier Montenegro
Heverin'ny governemanta rosiana fa hifindra amin'ny Linux izy
Navoaka ny fanavaozana OpenShot 2.0 vaovao